शिक्षा / स्वास्थ्य - स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम खुल्यो - page 3
काठमाडौँ । मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महीना थप भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको हुँदा म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महीना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
विकट गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा : जहाँ पशुलाई झारफुक गरिन्छ !
लमही । सरकारको एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षाको अवधारणाअनुसार दाङको राजपुर गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको छ । दाङको विकट गाउँपालिकाको रूपमा रहेको राजपुरमा पहिलोपटक प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको हो । राजपुर–५ सालभौँरीस्थित साधारण माध्यमिक विद्यालय गङ्गदीमा पशु विज्ञानको पढाइ शुरु भएको हो । सोमबार विद्यालयको ५९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका सल्लाहकार जीवन गौतम र प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले प्राविधिक शिक्षाको उद्घाटन गरे ।	थप पढ्नुहोस्
अत्यधिक गर्मी बढेपछि तीन दिन विद्यालय बन्द
जीतपुर । केही दिनयता बढेको गर्मीका कारण कपिलवस्तु जिल्ला वाणगङ्गा नगरपालिकामा रहेका विद्यालय आजदेखि तीन दिनका लागि बन्द हुने भएका छन् । अत्यधिक गर्मी बढेपछि दिनचर्यामा समेत समस्या भएकाले शिक्षक महासङ्घ नगर कमिटी, प्याब्सन नगर कमिटी र वाणगङ्गा नगर शिक्षा समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यही असार ४ गतेसम्मका लागि सरकारी, निजी, सामुदायिक, धार्मिक विद्यालयका साथै मन्टेश्वरीमा गर्मी बिदा दिइएको बाणगङ्गा नगर शिक्षा अधिकृत खिमबहादुर जिसीले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
यस वर्षको एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो साता सार्वजनिक हुने
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षाको परीक्षाफल असार दोस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । गत वर्ष असार ९ गते नतिजा प्रकाशित भएकामा यस वर्ष भने प्रदेश नं २ मा परीक्षा स्थगित गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको र कर्मचारी समायोजनका कारण कर्मचारीको अभाव भएकाले नतिजा प्रकाशनमा केही दिन ढिला हुने भएको बोर्डले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
आकाशको फल सरह विश्वमै कडा मानिने सिएफए डिग्रीका लागि एक लाख परीक्षार्थी
काठमाडौँ । विश्वभर नै चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट (सिएफए) परीक्षा सुरु भएको छ। अत्यन्तै कडा परीक्षा मानिने सिएफएको परीक्षाफलमा सफलता भने धेरै कमलाई मात्र हात पर्छ। परीक्षार्थीहरुले ६ घण्टा लगाएर २ सय ४० वटा मल्टिपल च्वाइस प्रश्नको समाधान गर्नुपर्छ र यसमा अधिकांश फेल हुन्छन्। हरेक बर्ष सिएफए डिग्री लिनका लागि विश्वभरका एक लाख परीक्षार्थीभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने गर्छन्। यो परीक्षा दिनुअघि विद्यार्थीहरुले कम्तीमा पनि ३ सय घण्टा पढेका हुन्छन्। तर परीक्षामा यसको पास रेट जम्मा ४० देखि ५० प्रतिशतमात्र छ ।	थप पढ्नुहोस्
के तपाई जीवनमा कसरी सुखी खुशी हुने भन्ने खोजीमा हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं । ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विकारलाई हटाउने प्रक्रियालाई नै योग भनिन्छ । ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ अथवा योगले कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्षम बनाउँछ । ‘योगस्थः कुरु कर्माणि’ अर्थात् योगमा स्थिर भएर काम गर । योगका बारेमा विभिन्न ग्रन्थमा यसरी चर्चा गरिएको छ । संस्कृत भाषामा योग शब्दको अर्थ जोड्नु भन्ने हुन्छ । मानिस दुःखमा बाँचिरहेको हुन्छ । कसरी सुखी खुशी हुने भन्ने खोजीमा हुन्छ । खुशीको स्रोत आफैँभित्र हुन्छ । त्यहाँ सम्पर्क गर्ने अथवा जोडिने अभ्यासलाई नै योग भनिन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
गर्मी बढेपछि ६ दिनका लागि विद्यालय बन्द !
बारा । देशैभर पानी नपर्दा गर्मी अत्यधिक बढेपछि बाराका सम्पूर्ण विद्यालयहरु ६ दिनका लागि बन्द गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय बाराको शनिबार सम्पन्न बैठकले असार १ गते देखि ६ गतेसम्मका लागि जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यार्थीहरु गर्मीको प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेपछि गर्मी बिदाबाट कट्टा हुने गरी विद्यालयहरु ६ दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको रौनियारले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
अब न गर्मीमा जस्ता तातेर बाफिनुपर्ने पीडा, न जाडोमा शीत चुहिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था !
गोरखा । गोरखामा २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययरत कल्पना गुरुङलाई अचेल विद्यालय आउँदा बेग्लै खुशी मिल्छ । चार वर्ष त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनी कष्टकर समय गुजारेपछि अत्याधुनिक भवनमा पढ्न थालेकी छिन् गुरुङ । अब न गर्मीमा जस्ता तातेर बाफिनुपर्ने पीडा न जाडोमा शीत चुहिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था । यस माविका ६ सय ३२ विद्यार्थी एक महिनाअघि अत्याधुनिक भवनमा सरेका छन् । कल्पना गुरुङजस्तै कक्षा १० कि सुनिता घले र कक्षा ९ का निर्देश बिसीका अनुहारबाट नयाँ भवनमा सर्न पाएको खुशी लुक्दैन ।	थप पढ्नुहोस्
नेपालमा हरेक वर्ष १२ लाख महिला गर्भवती, ४५ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य !
पोखरा । २१औँ शताब्दीमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका छन् । गुट्माकर इन्स्टिच्युट, वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र 'कृपा' द्वारा गरिएको एक अध्ययनको प्रतिवेदनले नेपालमा ठूलो सङ्ख्याका महिला यस्ता साधनको पहुँचकै अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
कुमारी बैंक र ह्याम्स्बीच किन भयो सम्झौता ?
काठमाडौं । आफ्ना ग्राहकहरुलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थोपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कुमारी बैंक लिमिटेड र हस्पिटल फोर अड्भान्स्ड एण्ड मेडिसिन सर्जरी (ह्याम्स्)बीच स्वास्थ्य सेवामा छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गिरी र ह्याम्स्का अध्यक्ष आर.एस्. भण्डारी ज्यूको हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता–पत्र अनुसार हस्पिटलका विभिन्न स्वास्थोपचार सेवा शुल्कमा ग्राहकवर्गले कुमारी बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्